China AUMAN EST DUMPER fekitari uye vagadziri | Foton
Yakakwira kutakura kugona uye kwakakwirira kutakura kugona
Dhiraivha Style 6 * 4 8 * 4
Kunonyanyisa Speed 85/95 km / h
Mukubatana neinjiniya yekushandisa inoda, dutu reAuman EST rakarongedzwa zvakagadzirwa nenyanzvi dzeBenz uye richangobva kugadzirwa uye kuvakwa zvinoenderana nematanho eEuropean ekuona mabudiro makuru maererano nekuvimbika, kushanda kwesimba, kuchengetedza mafuta, zvakachengeteka, kunyaradza uye kuunza kukosha kwechiitiko chepamusoro chekufambisa kugona uye yepamusoro kutakura kugona kwevatengi.
Rori inofambiswa neCummins ese-nyowani ISG injini ine yakakwira torque kuburitsa uye ine simba gradeabiilty; iyo sisitimu yemagetsi yakagadziridzwa uye kuchekereswa nematekinoroji eBenz kuti ipe kutamba kuzere kune torque yepamusoro uye nekuona kwakanyanya kutapurirana kugona.
2,000bar yekuwedzera-yakanyanya kumanikidza jekiseni
12L hombe yekufambisa injini
2,300NM yakakwira torque kuburitsa
Iyo iBrake injini inobatsira system inowana 370ps yakakwira braking simba Widened brake bhutsu: Iyo indasitiri yakakura kwazvo mabhureki shangu anodimbura pfupi braking chinhambwe ne20%.
Iyo tekisi inotora chimiro chechimiro chemuviri chakasunganidzwa ne1mm gobvu simbi machira nemhando yepamusoro-chaiyo marobhoti uye ndokupfuura epamberi nedivi bvunzo bvunzo, yedenga simba bvunzo, uye yekumberi anti-underrun yekurovera bvunzo.
Kuvhenekesa Sisitimu Yekuchengetedza
Iyo yehusiku yakakwira-yakasimba mwenje yekuvhenekesa sisitimu, kusanganisira mwenje wedashboard, mwenje wemidziyo, uye mwenje wehusiku kumberi rezinesi ndiro, inovimbisa kuchengetedzeka kwekushanda kwehusiku.
Iyo 130mm hombe cylinder inobata maitirwo ekushandisa inoiswa uye iyo yekumhanyisa booster pombi haina kumisikidzwa kuona iri nyore uye inoshanduka nzira yekufambisa uye yepamusoro kutyaira chengetedzo.
Iyo yakagadziridzwa masisitimu dhizaini muU-mhando dhizaini inogona kusangana nesimba rekushandisa rinodiwa uye kudzikisira huremu.
Iyo yepamusoro dhizaini inogadzirwa neakakwira-simba simbi machira ane ≥800MPa goho simba uye ≥300HB Brinell kuomarara kunoshamisa kunatsiridza kupfeka kuramba uye ngura kuramba uye zvakanyatsonaka kuwedzera hupenyu.
Iyo U-mhando dhizaini ine yakanaka inowirirana modelling inoshandiswa kuti uone kutsetseka kwezvinhu kurasa, pasina chero chakanamatira zvinhu, uye kugadzirisa chinononoka kurasa dambudziko panguva yekufambisa kwezvinhu zvine kukwirira kwakasimba.